crypto Archives - ရတနာသိုက်
မင်ျဂလာပါ ဒီနတေ့ော့ တောငျးဆိုသူ ဦးလေး @htwegyi သိခငျြလို့ရေးသားပေးလိုကျပါတယျ။ steempress အလုပျလုပျပုံကတော့ မိမိမှာ wordpress နဲ့ပွုလုပျထားတဲ့ website တဈခုရှိရပါမယျ။ wordpress မှာက အခမဲ့နဲ့ရေးသားနိုငျပမေဲ့ steempress plugin ထညျ့သှငျးဖို့က အခမဲ့နဲ့မရနိုငျပါဘူး ဒါကွောငျ့ ကိုယျပိုငျ domain+hosting နဲ့ပွုလုပျထားတဲ့ wordpress website တဈခုပိုငျဆိုငျမှ steempress နဲ့ခြိတျပွီး website ပျေါရေးသားနယေုံဖွငျ့ steemit ပျေါအလိုလိုရောကျရှိပွီး upvote ကွီးကွီးရနိုငျမှာပါ။ website တဈခုရှိပွီးဆိုရငျ steempress plugin ကို ခုပေးတဲ့လငျ့မှာဒေါငျးပွီးထညျ့သှငျးလိုကျပါ။ အဲအခြိနျမှာ မိမိကိုယျဆကျသှယျဖို့ email တောငျးပါလိမျ့မယျ။ မိမိအသုံးပွုနသေညျ့ email ထညျ့သှငျးပွီး ဒေါငျးယူလိုကျပါ။ https://steempress.io/signup?ref=nayhlaingsoe ပွီးရငျ website ထဲထညျ့သှငျးပွီးတာနဲ့ အတိပွုဖို့ email […]
ကြှနျတျော လစဉျတော့ power up နိုငျအောငျကွိုးစားပါတယျ။ အမြားဆုံး steem မြားရရှိလာတာကတော့ steemmonster games ကနရေတာပါ။ လစဉျ steem 100 ကနေ 200 လောကျရနိုငျပါတယျ။ အခွား အရောငျးအဝယျတှကေနလေညျးရရှိခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အရောငျးအဝယျကဟာတှကေို power up ခွငျးမှာမသုံးပဲ ကိုယျတိုငျပွုလို့ရတာတှပေဲ power up ဖို့အသုံးပွုခဲ့ပါတယျ။ ဒီလတော့ ကိုယျရှာထားတဲ့ ၁၃၃ steem ကို power up ခဲ့လို့ ပွိုငျပှဲမှာ တတိယဆု ရရှိခဲ့ပါပွီ။ ဆုလညျး လကျခံရရှိပွီးပွီဖွဈလို့ upvote မြားပေးဖို့လညျး အဆငျသငျ့ဖွဈနပေါပွီဗြာ။ မြားတုနျးပေးနိုငျတာမို့ပါ။ nextcolony ကတော့ခုထိတောငျ ဂွိုလျတဈလုံးမှ ရှာမတှသေ့ေးဘူး အဲမှာ ရငျးနှီးမှုလညျးမလုပျခဲ့လို့ပါ အခမဲ့ရတာလေးနဲ့ level တှမွှေငျ့ရငျ ရှဆေ့ကျသှားနပေါတယျ။ […]
steempress မှာ ဗုတျရဖို့ ကွိုးစားခဲ့တာကွာနပွေီ ခုလညျးကွိုးစားတုနျးပါ တဈခုလတေောငျလာမပေးသေးဘူးဗြို့။ ခုလညျးနောကျထပျ အကောငျ့အသဈတဈခုဖွဈတဲ့ @mgnitu ဆိုပွီး စတငျသုံးစှဲတာနဲ့ steempress နဲ့ခြိတျဆကျထားပါပွီ။ ခု update မှာ website မှာပို့ဈတငျလိုကျတာနဲ့ အခွားလူတှတေငျသလိုမြိုး အောကျဆုံးမှာ powered by steempress ဆိုပွီး web url နဲ့ ပါလာတာ အကောငျ့နှဈစလုံးမတှရေ့တာလညျး တျောတျောထူးဆနျးနပေါတယျ။ @mgnitu အကောငျ့ကတော့ ဒီနမှေ့စတငျလိုကျတဲ့အတှကျ ဘယျလိုလာမလဲ မသိသေးပါဘူး။ steemit ရဲ့ထူးခွားခကျြက အခုအကောငျ့အသဈဖှငျ့ရငျ တဈညနဲ့ ရလာတာပါ။ အခမဲ့ဖှငျ့ခွငျးအတှကျပွောတာပါ။ ခုရကျပိုငျးအလုပျတှကေ မြားလားဆိုလညျး မမြားဘူး။ ဒါပမေဲ့ နားရတယျမရှိခဲ့ဘူးဗြို့။ ဂိမျးတှတေောငျ ဝငျမဆော့နိုငျတဲ့အဖွဈပါ။ စာရိုကျလကျခံထားတာလညျးပါပါတယျ။ စာရိုကျတာလညျးပွီးခါနီးပွီဆိုတော့။ နညျးနညျးအခြိနျပေးရတော့မှာပါ။ nextcolony မှာတော့ ကစားလာတာကွာနပေမေဲ့ ခုထိ […]
blockchain နညျးပညာမှာ အရမျးကွီး မကြှမျးကငျြဘူးဆိုပမေဲ့ သဘောတရားလောကျတော့ နားလညျခဲ့ပါတယျ။ သုံးစှဲခဲ့တဲ့ ကာလတှအေတှငျးမှာ transition ကွာနတော pending 48 hs အထိကွာမွငျ့တာတှလေညျး ကွုံတှဖေူ့းပါတယျ။ ဒီလိုတှကွေုံတှခေဲ့တော့ block ကွောငျ့လား၊ web တှကွေောငျ့လား၊ miner တှကွေောငျ့လားဆိုတာလညျး ကောငျးကောငျးတော့မသိခဲ့ပါဘူး။ btc မှာတော့ ပေးပို့ခွငျးမှာ တဈဦးတညျ ပေးပို့ခွငျးမြိုးမဟုတျတာတှရေ့ပွနျတယျ။ ပမာဏမြားသူကပေးပို့ရငျ လကျခံမဲ့သူ ခှဲဝယေူခွငျးစနဈကွောငျ့ အခြိနျကွာတာတှလေညျး တှဖေူ့းပါတယျ။ ဒါကတော့တဈနရောနဲ့ တဈနရော လှဲပွောငျးတဲ့အခါမှာပါ။ exchange site ခငျြးတူရငျတော့ address မဟုတျပဲ email နဲ့ပေးပို့ပါက ခကျြခငျြးရောကျတာလညျးတှရေ့ပွနျရော။ ကြှနျတျောတို့ steem မှာကွတော့ btc ထကျပိုတောငျအားသာနတေယျပွောရပါမယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ steem ပျေါအခွခေံတဲ့အရာတှမြေားပွားလာလို့ပါ။ market တှလေညျးမြားလာပွီး ဂိမျးတှလေညျးမြားပွားခဲ့ကွတယျ။ […]
spud5 မှာတော့ အဆငျ့ ၉ နဲ့ ဆုရခဲ့ပါတယျ။ power up နိုငျခဲ့တာက 42 steem ပဲရှိခဲ့ပါတယျ။ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ နညျးခဲ့တာပါ။ အကွောငျးအရငျးက steemspeak တှဝေယျပဈလိုကျတာအမှားကွီးမှားခဲ့မိလို့ပါ။ 1 steemspeak ကို 22 steem ဈေးကစလိုကျတာ ခုဆို ဈေးက 0.38 steem ဆိုတော့ အမြားကွီးအထိနာခဲ့ပါတယျ။ ခုလကျထဲတော့ 288 steemspeak သောငျးတငျနပေါပွီ။ ဆုံးရှုံးနတေဲ့ steem ပေါငျးမနညျးပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ power up ဖို့ အားနညျးခဲ့ပါတယျ။ steempress ကလညျး ရမလားဆိုပွီး ပို့ဈတှရေေးတငျတယျ ခုထိ လိုငျစငျမရသေးတော့ ဗုတျရဖို့ မလှယျသေးပါ။ ဘယျလိုလုပျရမလဲဆိုတာလညျး မစဉျးစားတကျတော့ဘူး။ drugwar ကတော့ သူ့ဂိမျးထဲမှာပဲ market […]
ကျွန်တော်ကတော့ မရင်းပဲ ကစားလာတဲ့ nextcolony မှာ ခုမှ ယာဉ်ဝယ်နိုင်ပါတော့တယ် ညနေလောက်ဆို ဆရာသမားတွေလို့ ဂြိုလ်ရှာလို့ရနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဆရာသမားတွေက ဂြိုလ် အသစ် တွေ များစွာနဲ့ ရပ်တည်နိုင်နေပေမဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ အခုမှ ဂြိုလ်ရှာနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိတော့မှာပါ။ ဂြိုလ်ရှာပြီး ဂြိုလ်တွေ့ပြီးဘာတွေလုပ်ရမလဲတော့ ကျွန်တော်လည်းမသိသေးဘူး။ အမြတ်အစွန်းဆိုတာလည်း ဘယ်လိုလဲမသိသေးဘူး။ wallet တစ်ပေါ်မှာတော့ သင့်တင့်တဲ့ ပမာဏ ရနေတာတော့တွေ့ရပါတယ်။ တန်ကြေးဘယ်လောက်ရှိဆိုတာလည်းမသိရသေးပါဘူး။ ငွေကြေးရင်းရတဲ့ပမဏများပေမဲ့ ရမည့်ဟာနည်းရင်လည်း အဆင်ကမပြေဘူးလေ အဲတာနဲ့ပဲ ငွေမရင်းပဲ level မြှင့်လာလိုက်တာပါ။
steempress ကနေ vote ရဖို့ ကြိုးစားနေတာကြာခဲ့ပါပြီ ဘယ်လိုပဲပို့စ်တွေရေးရေး မရခဲ့ဘူး ခုလည်း ရမလားပြန်ကြိုးစားရင်း ပြောင်းလဲသွားတဲ့ steempress ကြောင့် လိုင်စင်တောင်မရရှိသေးပါ။ ပို့စ် ဘယ်နှခုလောက်တင်မှ လိုင်စင်ပေးမလဲတော့မသိရသေးပြန်ဘူး။ domain ဖိုး hosting ဖိုးနဲ့မွှဲနိုင်တယ် သူ့ vote စောင့်ရတာ။ နောက်ထပ် အရင်နဲ့မတူတာက wordpress မှာ ပို့စ်တင်လိုက်တာနဲ့ ချက်ချင်း steemit ပေါ်ရောက်မသွားပဲ အချိန်စောင့်ကြည့်ပါသေးတယ်။ auto bot ? spem? လားဆိုပြီး စောင့်ကြည့်ပြီး အမှန်အကန်ပို့စ်မှသာလျှင် steemit ပေါ်တင်ပေးတာတွေ့ရပြန်တယ်။ နောက်ထပ် steempeak က သုံးလို့ကောင်းပြီး သူထုတ်လိုက်တဲ့ token တွေဟာ အစပိုင်း 1 steempeak = 25 steem ဈေးပေါက်ခဲ့ပေမဲ့ […]
စတင်သူတွေအတွက် တော်တော်လေး နားလည်ရခတ်ပြီး တော်တော် ရှုပ်ထွေးနေတာတွေ့ရပါတယ်။ ခုရက်ပိုင်း သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် လုပ်ချင်တယ်ပြောလို့ အသစ်တစ်ခုလုပ်ပေးတာ အခမဲ့ အနေနဲ့ဆို တစ်ပတ်ကျော်စောင့်ရလို့ ငွေပေးပြီးလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီး စမ်းကြည့်တာ မလွယ်လှပါဘူး။ ခုနောက်ပိုင်း ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ ရှုပ်ထွေးမှုတွေဟာ စတင်မည့်သူအတွက် နားလည်ရခက်ခဲစေပါတယ်။ master key, password, posting key, active key, steemconnect password စသဖြင့် တော်တော်လေး ရှုပ်ထွေးတာတွေ့ရတော့ ကျွန်တော်တို့လောကကြီး ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် မလွယ်လှဘူးလို့ မြင်လိုက်မိတယ်။ အကောင့်ဖွင့်ဖို့ ငွေပေးချေးဖွင့်မယ်ဆိုရင်တောင် အမျိုးပေါင်းများစွာနဲ့ ဘယ်လိုမှ မလွယ်ကူတာတွေ့ရတယ်။ ဒါတောင် steem-engine ဆိုတာမပြောသေးဘူး။ လူသစ်တစ်ယောက်ကို လက်တွဲခေါ်ဖို့ တော်တော်လေးအချိန်ပေး သင်ပေးရမည့်ဖြစ်မျိုးကို တွေ့မြင်ခဲ့လို့ပါ။ key ပေါင်းစုံ password ပေါင်းစုံနဲ့ blockchain ကိုနားလည်ဖို့ […]
click ပြီး crypto token လေးတွေ အခမဲ့လိုချင်ကြလား
referral မရှိပါဘူး ရစေချင်တဲ့ စေတနာပါပဲ။ အင်တာနက် အခမဲ့သို့မဟုတ် အချိန်လည်းရ အင်တာနက်ကြေး ထွေထွေထူးထူးမကုန်တဲ့သူများအတွက်သာအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် token တွေကို စုထားချင်သူများအတွက်လည်း အဆင်ပြေစေမှာပါ။ ဒီ crypto token ကတော့ steemit အုပ်စုဖြစ်တဲ့အတွက် steemit account ရှိသင့်ပါတယ်။ အကောင့်လုပ်ချင်သူများအတွက် www.steemit.com မှာဝင်ရောက်ဖွင့်ပါ။ အကောင့်က အခမဲ့ဖွင့် ချက်ချင်းမရပါ။ တစ်ပတ်လောက်စောင့်ရပါမယ်။ ငွေပေးပြီးဖွင့်ရင်တော့ ချက်ချင်းရရှိစေမှာပါ။ အကောင့်ဖွင့်လို့ရလာတဲ့ user name, master key, password တွေကိုသေချာသိမ်းထားပါ။ နောက်တစ်ခါထပ်မရတော့သူလို့ forgot လည်းမရနိုင်ပါ။ ဘဏ်ပုံစံဖြစ်သောကြောင့် အခြားသူများကိုလုံးဝမပြောသင့် မပြသင့်ပါ။ နောက်ထပ်က token တွေကို အရောင်းအဝယ်လုပ်ဖို့ exchange ဆိုက်ကတော့ https://steem-engine.com ဒီမှာကတော့ မိမိရရှိလာတဲ့ token […]
လီဘရာငွေကြေးအတွက် ထိုင်းဗဟိုဘဏ်သို့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ချဉ်းကပ်
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သည် ၎င်းဦးဆောင်ဖန်တီးမည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး လီဘရာအတွက် ထိုင်းဗဟိုဘဏ်ကို ချဉ်းကပ်နေပြီဖြစ်သည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သုံးစွဲသူသန်း ၅၀ မှတ်ပုံတင်ထားသည် ထိုင်းမှ ဗဟိုဘဏ်နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးလိုကြောင်း ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှ မေတ္တာရပ်ခံထားကြောင်း၊ အစီအစဉ်ကိုမကြာမီ အပြီးသတ်ထုတ်ပြန်မည်ဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းအစိုးရ ငွေပေးချေမှုစနစ် မူဝါဒ လက်ထောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဆီရီတီဒါ ပါနွမ်ဝွန်က ပြောသည်။ ထိုင်းဗဟိုဘဏ်သည် လီဘရာငွေကြေး၏ တည်ငြိမ်မှုနှင့် ၎င်းစက္ကူဖြူစာတမ်းကိုလေ့လာရန် အထူးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စေလွှတ်သွားမည်ဆိုသည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သည် လီဘရာအရေးကို ကမ္ဘာတဝန်း လှည့်လည်ဆွေးနွေးနေသည်။ လီဘရာသည် ဘဏ်စပေါ်ငွေနှင့် အစိုးရဘွန်းများကဲ့သို့ လက်တွေ့ကမ္ဘာမှ အရင်းအနှီးများကို ကျောထောက်နောက်ခံပြုပြီး တည်ငြိမ်သည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးဖြစ်ရန် ဖော်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကာ ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းမှုများနှင့် ငွေပေးချေမှုများအတွက် ပိုမိုလက်တွေ့ကျကျ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်က ပြောဆိုထားသည်။ သန်းချီသောဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သုံးစွဲသူများနှင့်အတူ ဗီဇာကဲ့သို့ ငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းကြီးများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် လီဘရာငွေကြေးသည် ငွေလွှဲပြောင်းမှုနှင့် ငွေပေးချေမှုလွှဲပြောင်းခြင်းများတွင် အသုံးပြုရန် မြင့်မားသည် […]